June 3, 2013 – democracy for burma
ရခိုင်နှစ်ပါတီပေါင်းစည်းရေး စတင်ဆွေးနွေးကြဖို့ ရတပ(RNDP) က ALD ထံ တရားဝင် စာဖြင့်အကြောင်းကြား
စစ်တွေ ၊ ၀၃ ဇွန်လ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင်း ]
ရခိုင်နှစ်ပါတီ ပူးပေါင်းနိုင်ရေးအတွက် ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ အချင်းချင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာနိုင်ရေးအတွက် နှစ်ပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ ဇွန်လ (၁၅) ရက်တွင် စတင်တွေ့ဆုံကြမည့် အကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ ကိုယ်စား ဒေါက်တာအေးမောင်က လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် စာကို ယနေ့ညနေ ခြောက်နာရီခန့်က ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (ALD) ထံ ပေးပို့လိုက်သည်။
စစ်တွေ ALD ဌာနချုပ်သို့ ပေးပို့သော မိတ္တူမှာ ပြီးခဲ့သော နာရီပိုင်းအတွင်းရောက်ရှိသွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ ALD ရန်ကုန်ဗဟိုသို့ ပေးပို့မည့် မူရင်းစာမှာ တစ်ရက်နှစ်ရက် အတွင်း ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
မကြာမီက အမ်းမြို့တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် ရတပပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပူးပေါင်းရေးအတွက် အခြေအမြစ်ရှိရှိ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် အရှိန်မြင့်ဆောင်ရွက်ရန် စတင်ခြေလှမ်းလှမ်း လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရတပ ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးက Coral Arakan News အား ပြောကြားသည်။
“အများ ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းခံရသည့် တတိယအင်အားစုများရှေ့မှောက်တွင် ကြိုတင်စည်းကမ်းချက်များ မပါရှိဘဲ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံကာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်အတွက် အခြေခံအချက်အလက်များကို ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် လူကြီးမင်းတို့ပါတီမှ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင် (၅) ဦး နှင့် ပထမအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိုပါသည်” ဟု အဆိုပါစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၃-ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့ နံနက် ကိုးနာရီတိတိ အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရခိုင်သဟာယ အသင်း ရုံးခန်းတွင် ရတပဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင် ခေါင်းဆောင်သော ရတပ ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးနှင့် တွေ့ဆုံရန် အတွက် ALD ဘက်မှ မိမိတို့ သင့်တော်သည် ဟု ယူဆရာ ALD ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် ငါးဦးစာရင်းကို RNDP သို့ ပေးပို့ပါရန် ယင်းစာက မေတ္တာရပ်ခံထားသည်။
ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်တကွ ပူးတွဲဖော်ပြထားသော RNDP ဘက်မှ ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်များမှာ ဒေါက်တာအေးမောင်၊ ဦးသာထွန်းလှ၊ ဒေါ်အေးနုစိန်၊ ဦးစံကျော်လှ၊ ဦးဖိုးမင်း နှင့် ဦးဦးရွှေမောင် တို့ ဖြစ်သည်။
( Coral Arakan News အတွက် ဟန်မောင်သိန်း ရေးသားသည်။ )
Rakhine leaders object to voting rights for Bengali Immigrants
Ethnic Rakhine leaders demand the election commission to deny voting rights to immigrant Bengalis with temporary identity cards (white cards) in the upcoming 2015 Election.
Aye Thar Aung, chairman of the Arkan League for Democracy, said temporary card holders should be denied citizenship and voting rights according to the 1982 Citizenship Law and the 2008 Constitution.
“A complaint letter will be submitted to the election commission based on the 1982 Citizenship Law to prevent these card holders from voting in the 2015 Election,” said Aye Thar Aung.
Dr Aye Maung, chairman of Rakhine Nationalities Development Party, said the temporary identity cards were not included in the 1982 Citizenship Law and the authorities should investigate the rights given to temporary card holders.
“When citizen rights have been given to unworthy people, we need to review whether this seems to harm ‘Perpetuation of Sovereignty’ [one of the three Main National Causes outlined by the military government after 1988].” Continue reading “Rakhine leaders object to voting rights for Bengali Immigrants” →
Roland Kobia new Head of the EU Delegation to Myanmar/Burma
On June 3, 2013 June 3, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Catherine Ashton, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice President of the Commission, announced today the appointment of Roland Kobia as Head of the EU Delegation to Myanmar/Burma.
On June 3, 2013 June 4, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Thank you everyone for giving me an opportunity to be here. It’s an honour.
When I was informed about this Award – I was really surprised. I never expected to be recognized for my profession, and for my work.
To be honest, I have previously only heard of this Award. I didn’t know what it meant or who were the recepients. After investigation, I realize that this isavery prestigious Award.
I understand that many journalists and writers who received this Award – had made numerous sacrifices and had to face up toalot of challenges.
Although I have givenalot to journalism, freedom of the press, and freedom of my people – I ask myself whether I had made the same extent of sacrifices as past recepients of this Award.
After much thought – I decide that this Award is not for me, but rather, for my struggling people. Continue reading “Golden Pen of Freedom awarded to Myanmar publisher” →
On June 3, 2013 June 5, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Myanmar Famous Composer KAT Dies in Yangon, Leaves Beautiful Words in Music
Posted From Htike Htike Tun
နောက်ဆုံးရထားနှင့်အတူထွက်ခွာသွားတဲ့တေးသီငှက် (သို့) ကေအေတီ
တေးရေးဆရာအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာရပ်တည်ခဲ့ပြီး တေးသီချင်းပေါင်းများစွာကို ရေးဖွဲ့ခဲ့သူ တေးရေး ကေအေတီ(ခေါ်)ဦးကျော်ကျော်အောင်က ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့လည် ၃ နာရီ အချိန်က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ ညနေ၅နာရီ အချိန် ရေဝေးသုဿန်တွင် ပို့ဆောင်သဂြိုဟ်ခဲ့ရာ ဂီတအနုပညာရှင်အများအပြား လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ရဲရဲ
PHOTO BY HTIKE HTIKE TUN
ေ တးေ ရး၊ကေအေ တီကောင်းရာသု ဂ တိရောက် ပါစေ . . .
-graphic design: ko myoe
U WIRA THU 2.JUNE,“ဦးဝီရသူထံ ဂျပန်သတင်းဌာနမှ လာရောက်အင်တာဗျူး” MAINICHI NEWSPAPERS (JAPAN)
“ဦးဝီရသူထံ ဂျာမန် သတင်းဌာနလာရောက် အင်တာဗျူး”
၂-၆-၂၀၁၃- မွန်းတည့် (၁၂း၀၀)နာရီတွင် ဓမ္မသဟာယကျောင်း၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ပြီး ဂျာမဏီနိုင်ငံ S.Z- သတင်းစာမှ Dr. Aerras ဖြစ်သည်။
နီယိုနာဇီတို့၊ နာဇီကတုံးတို့၊ ဘာမီးစ် ဘင်လာဒင်တို့၊ မြန်မာအိုစမာတို့ဟာ ကုလားတွေ အသုံးပြုနေကြတဲ့ အမည်တွေပါ။ ဦးဇင်းကိုယ် ဦးဇင်း အဲဒီလို မခံယူဖူးပါဘူး။ အဲဒီလို အပြောခံရလို့လည်း လုံးဝတုန်လှုပ်မှု မရှိပါဘူး။
ကိုယ့်လူမျိုး၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်သာသနာကို လွတ်လပ်စွာ ချစ်ခွင့်ရှိသလို၊ လွတ်လပ်စွာ ကာကွယ်ခွင့် လည်း ရှိပါတယ်။
ကာကွယ်တာကို တိုက်ခိုက်တ် ထင်ပြီး၊ စွပ်စွဲနေတာကတော့ ဦးနှောက်မဲ့လူသားတွေ (သို့) မှိုင်းမိလူသား အတ္တသမားတွေ ဖြစ်နေလို့ နေမှာပါ။
“ဦးဝီရသူထံ ဂျပန်သတင်းဌာနမှ လာရောက်အင်တာဗျူး”
၂-၆-၂၀၁၃- ညနေ (၂း၃၀)နာရီတွင် ဓမ္မသဟာယကျောင်း၌ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ပြီး၊ THE MAINICHI NEWSPAPERS (JAPAN) မှ Mr. Takayuki KASUGA- ဖြစ်သည်။
Mr. Takayuki KASUGA-သည် ဦးဝီရသူအား အိုစမာဘင်လာဒင်နှင့် နှိုင်းကာ အကြမ်းဖက်သမား အသွင် ပုံဖော်နေကြသူများအား ပြန်လည်ချေပလို၍ လာရောက်တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ဦးဝီရသူကို မြန်မာပြည်၏ မဟတ္တမဂန္ဓီ အဖြစ် ဂုဏ်ပြုရေးသားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပတ်သက်၍ အခုလို ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
အရင်တုန်းက “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရာခိုင်နှုံးပြည့် ထောက်ခံ အားပေးခဲ့တယ်။ အမေတစ်ယောက်လို အားကိုးခဲ့တယ်။ ရခိုင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမှတ်တွေ လျှော့ပစ်လိုက်ပြီ။ နောင်တစ်ချိန်မှာ အမျိုးသားသစ္စာဖောက် အဖြစ်နှင့် မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ ဘုံရန်သူ ဖြစ်သွားမှာတောင် စိုးရိမ်နေရတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမျိုးသားရေးအတွက် အားကိုးလို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အဆုံး ပြည်သူတွေ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးဖို့ပဲ လှည့်လည် ဟောကြားနေရတယ်။”
“ဦးဝီရသူ ရတနာပန်းခင်း ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်းဆင်းပွဲ သြဝါဒတရားဟောကြား”
၂-၆-၂၀၁၃- ည(၇း၀၀)နာရီ၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ အင်းဇရွာ၊ ဒသမအကြိမ် ရတနာပန်းခင်း ယဉ်ကျေး လိမ္မာသင်တန်း ဆင်းပွဲမှာ ဟောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသူ/သား နှစ်ရာအပြင်၊ အင်းဇရာသူ/သားများပါ လာရောက် နာယူကြသည်။
ဓမ္မပူဇာ ဝတ္ထုငွေ (၂၅၃၀၀၀)ကျပ်ကို အင်းဇရွာရှိ ရတနာပန်းခင်း စာကြည့်တိုက် အတွက် ပြန်လည် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Myanmar’s Two Child Policy and the Human Rights Paradoxes
By: Dr.Tun Kyaw Nyein
The local authorities in Rakhine State reaffirmeda2005 regulation
imposingatwo child policy for Bengali Muslims in Buthidaung and
Maungdaw townships. This policy evoked thunderous howls of protest from
human rights organizations as well as the international media that
slammed it asaviolation of human rights.
Several countries in Asia have child restriction policies. Such
policies are either already in place, in planning stage or contemplated
as population growth posesachallenge to the general welfare of their
citizens. China’s one-child policy isawell known example. Vietnam has
hadatwo-child policy since 1960, which is now relaxed; India has a
two-child policy foraspecific defined group; and the Phillipines is
giving serious thought to child restriction policies.
If we takealook at these policies from the perspective of global
basic human rights as formulated in the United Nations Declaration of
Human Rights, the picture is ambiguous.
The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) encompasses political,
social, economic and cultural rights, positive and negative rights.
These rights have been specified and amended in the past decades in
several UN conferences and Covenants. For instance,acovenant of 1968
has specified with regard to our topic that “parents haveabasic human
right to determine freely and responsibly the number and the spacing of
their children.” However, the UDHR has also formulated social and
economic rights such as the right to have work, the right to social
security or like in Article 25 “the right toastandard of living
including food, clothing, housing and medical care and necessary social Continue reading “Myanmar’s Two Child Policy and the Human Rights Paradoxes By: Dr. Tun Kyaw Nyein” →
ALERT!! BANGLADESH : Fear of Militant Attack :Arakan Rohingya Force,Arakan Mujahid Part.,အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်စောင့်ကြည့်ခံရသောအဖွဲ့များတွင်ဤအဖွဲ့အစည်းများပါပါတယ်။သိထားသင့်ပါတယ်
On June 3, 2013 July 12, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
update 11.july 2013
The visit, announced on the radical Ar Rahmah Media Network website, http://www.arrahmah.com/ is another sign that Myanmar’s sectarian clashes are spilling beyond its borders.
Yesterday, the Ar Rahmah website founded by Jemaah Islamiah (JI) member Muhammad Jibril Abdul Rahman also uploaded 28 photos of Rohingyas undergoing military training in Rakhine state, billing ita“Ramadan gift” and hoping it would “encourage Muslims around the world to reignite jihad in Arakan”. Arakan is the former name of Rakhine state.
International Crisis Group senior adviser Sidney Jones told The Straits Times: “There’salong history between the JI and RSO that goes back to Afghanistan.”
Indonesian Muhammad Jibril wasamember of the JI’s Karachi- based Al-Ghuraba cell, had links to Al-Qaeda and Taleban staff, and was put onasanctions list by the United States in 2011.
International Khatme Nabuat Movement, Arakan Rohingya Force, Islamic Solidarity Font, Arakan People’s Army, Liberation Myanmar Force, Arakan Mujahid Party, Rohingya Independence Force, Rohingya Independence Army, Rohingya Patriotic Front Al-Harat-Al Islamia, Tauhidi Janata, World Islami Front, Jumaatul Al Sadat, Sahadat-e-Nabuat, Allahar Dal, Islamic Front, Jamaat As Sadat, Al-Khidmat, Hizbullah Islami Samaj, Muslim Millat, Sharia Council, Ahle Hadis Andolan Bangladesh, Dawati Kafela, Hizbul Mahdi, Bangladesh Anti-terrorist Party, Al Islam Martians Brigade, Jommiat Ahle Hadis Andolon, Jommiatul Ehzia Utraz, Hayatur Ilaha, Sattabad, Anjumane Talamize Islamia, Kalemar Jamaat, Tazir Bangladesh, Forkan Movement, Sahaba Parishad, Ketal Bahini, Eshar Bahini, Al Fahad, Horkatul Mujahidin, Mujahidin-e-Tazim, Jadid Al-Kayda, Al Markajul Al Islami and Jamatul Falaiya.
Intelligence sources said the parties are mainly active in the Baitul Mukarram Mosque area and Chittagong district. They recently joined the Hefazat-e-Islami demonstrations and protest programmes, which first gained momentum in Chittagong.
Hefazat activists set fire on nayapaltan during the Dhaka siege on Sunday
Aside from these, Ansarullah Bangla Team, another militant outfit that has recently come under the spotlight, is planning to launch attacks. This organisation isaprototype of al-Qaeda.
Five members of the group were recently arrested after they killed blogger Rajib Hayder in the capital following Ganojagaran Mancha protest programmes demanding capital punishment for war criminals.
Members of the law enforcement first came to know about the militant group from the three North South University students arrested in connection with the murder of Rajib.
AKM Shahidul Haque, additional inspector general of police, said the intelligence agencies constantly watch the activities of the Islamist groups.
The Arakan Army is Ready to Stand in the Motherland
10.may 2013 CREDIT phophtawnew
Inarecent meeting with President U Thein Sein, Arakan Army (AA) leaders welcomed the request made by the Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) to
welcomed the request made by the Rakhine Nationalities Development Party (RNDP) to have the AA permanently reside in Rakhine land. The news was reported by AA’s Chief of Staff, Brigadier Tun Myat Naing.
“This isademand made by the Rakhine people and the RNDP is merely trying to follow through; it needs for the AA to settle down. This is part of the agreement the RNDP made with the government after discussing the political issue. The AA is ready to protect the Rakhine people,” he said.
In the May 5th meeting, held in the capital city of Naypyitaw, the RNDP petitioned the president and the political parties to assist the AA in ‘settling down’ in the Rakhine State border area.
Currently based in Kachin State, the AA is part of the Rakhine Army group – which is equipped with about 2000 forces. The AA was established on April 10th of 2009, with the objective of assisting in the Rakhine people in obtaining self-administration and self-determination.
The RNDP isaparty which works to support Myanmar’s Rakhine people. It last held party elections in 2010.
Reported in the May 8th issue of the Myanmar Post, the RNDP’s chairman U Aye Maung requested the government and the AA discuss the convenience of the relocation arrangement as well as the expectations and the feasibility of meeting the demands of the Rakhine people.
The Arakan Army is in full support of the RNDP’s request for the AA to reside in Rakhine State.
“We are receptive to the RNDP’s demand and will have to live in Kachin State according to the stipulations. With permission from the government, the AA will settle down in Rakhine State only,” said Brigadier Tun Myat Naing..
The Arakan Army has not provisionally decided whether they will serve under the Rakhine Party.
BANGLADESH ALERT ON ,MILITANT ATTACK : Arakan Rohingya Force, Islamic Solidarity Font, Arakan People’s Army, Liberation Myanmar Force, Arakan Mujahid Party, Rohingya Independence Force, Rohingya Independence Army, Rohingya Patriotic Front